Toon Cup 2018 - Cartoon Network’s Football Game 1.3.10 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.10 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား အားကစားမ်ား Toon Cup 2018 - Cartoon Network’s Football Game
Toon Cup 2018 - Cartoon Network’s Football Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းကွန်ယက်အဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့် Toon ဖလား 2018 ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဂိမ်းအတွက်ယှဉ်ပြိုင်!
ယခုလုံးဝအခမဲ့ဘောလုံးဂိမ်း Play ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဂိုးသွင်းနှင့်သင့်တိုင်းပြည်ဦးဆောင်၏အပေါ်ဆုံးရကူညီ!
စွန့်စားမှုအချိန်, ဘင် 10 ကနေကစားသမား Pick, Gumball, Powerpuff မိန်းကလေးများ, ပုံမှန်ပြသပါ, ဆယ်ကျော်သက်ဖို့အတွက် Titans တွေက Go ကိုနှင့်ကျနော်တို့ကိုရှင်းလင်းသောဝံ။ တပ်မှူးနှစ်ယောက်အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တွေ - တစ်ခုချင်းစီကိုအသင်း3ကစားသမားရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အမြန်နှုန်း, သေနတ်အာဏာနှင့်ပစ်သတ်တိကျမှန်ကန်မှုအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ် - ဒါကြောင့်သင်ကပြီးပြည့်စုံသောအဖွဲ့သည်ဖန်တီးရန်ကြိုးစားနိုင်ပါ!
ရည်ရွယ်ချက်မှာသင့်ကိုယ်ပိုင်အသားတင်ခုခံနေတုန်းရည်မှန်းချက်များဂိုးသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘောလုံးကိုကိုင်တွယ်, dribble, pass နှင့် shoot! အရမ်းဂိမ်းကာလအတွင်း drop သောကျပန်းပါဝါ-ups အဘို့အထွက် Watch - သူတို့သည်သင်၏အသင်းအဖွဲ့ဝင်များကအရေးပါသောတိုးတက်မှုပေးပါ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်!
ဒင်္ဂါးပြားဝင်ငွေအားဖြင့်အသစ်သောကစားသမား Unlock ။ သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုသင်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်ပိုမိုဒင်္ဂါးပြားအဆိုပါကောင်း၏။
အဆိုပါဂိမ်းပျော်စရာနှင့်အစာရှောင်ခြင်း-PACE ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်အဆိုပါကာတွန်းကွန်ယက်အဖွဲ့များထိန်းချုပ်ထားနှင့် Toon ဖလား 2018 ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဂိမ်းအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ပျော်မွေ့မည်!
, အင်္ဂလိပ်, ပိုလန်, ရုရှား, အီတလီ, တူရကီ, ရိုမေးနီးယား, အာရဗစ်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, စပိန်, ဘူဂေးရီးယား, ခကျြ, ဒိန်းမတ်, ဟနျဂရေီ, ဒတျချြ, ဘှ, ပျေါတူဂီ, ဆှီဒငျ, ဘရာဇီး, ပျေါတူဂီလက်တင်: ဒီဂိမ်းကိုအောက်ပါဘာသာစကားများရရှိနိုင်ပါသည် ဗီယက်နမ်, အမေရိကန်, စပိနျ, ဂျပန်,
သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများရှိခြင်းဆိုရင်တော့ apps.emea@turner.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သငျသညျသို့အပြေးနေတဲ့သင်တို့ကဲ့သို့အသုံးပြုနေသောအရာကိုစက်ကိရိယာနှင့် OS ဗားရှင်းကိစ္စရပ်များအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။ ဒီ app ကာတွန်းကွန်ယက် & ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက် '' ထုတ်ကုန်များ & န်ဆောင်မှုကြော်ငြာများပါဝင်နိုင်သည်။
သင်သည်ဤဂိမ်းကို download လုပ်ပါမီ, ဒီ app များထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ
- ဂိမ်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာဘို့နှင့်ငါတို့တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဂိမ်းဒေသများနားလည်မှုအတွက် "Analytics မှ";
- Turner ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များကထောက်ပံ့ပေး '' non-ပစ်မှတ်ထား '' ကြော်ငြာ။
Toon Cup 2018 - Cartoon Network’s Football Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Toon Cup 2018 - Cartoon Network’s Football Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Toon Cup 2018 - Cartoon Network’s Football Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
kukarucatuga စတိုး 2.73k 761.9k
Toon Cup 2018 - Cartoon Network’s Football Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Toon Cup 2018 - Cartoon Network’s Football Game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.3.10
ထုတ်လုပ်သူ Cartoon Network EMEA
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.cartoonnetwork.co.uk/privacy-policy
လက်မှတ် SHA1: 9B:A3:18:97:D5:57:52:88:9A:67:8E:A0:AB:C5:8F:EA:4A:02:73:B7
Toon Cup 2018 - Cartoon Network’s Football Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ